I-Antarctica ingaba yiqhwa elingaphansi ngama-25% ngasekupheleni kwekhulu leminyaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izifunda ezibandayo, ezimbozwe yiqhwa, yizona ezisengozini enkulu ekushiseni komhlaba. Kokubili i-Arctic ne-Antarctica kunezinguquko ezinkulu. Endabeni ethile ye-Antarctica, izindawo ezingenawo iqhwa zizokwanda futhi zizogcina zihlangene njengoba iqhwa lincibilika.
Ngokusho kocwaningo olusha oluqhamuka e-Australian Antarctic Division (AAD), olushicilelwe kulo magazini Nature, ngasekupheleni kwekhulu leminyaka epharadesi elimhlophe kungaba neqhwa elicishe libe ngu-25%; leyo angathola cishe amakhilomitha-skwele angu-17.267 omhlaba.
Kulabo abafuna ukuya e-Antarctica ngokuzayo, ngokuqinisekile kuzoba lula kakhulu kunamanje. Kepha, le miphumela ingaba namiphi imiphumela? Yebo, okusobala kakhulu sonke esaziyo ukuthi yi- ukuphakama kolwandle. Konke lokho ukuncibilika kweqhwa kufanele kuye ndawo, futhi kusobala ukuthi kuya olwandle.
Ngasekupheleni kweminyaka eyinkulungwane, iplanethi enguMhlaba izohluka kakhulu, yehluke kakhulu njengezilwandle zayo bazobe sebekhule ngamamitha angama-30, futhi iminyaka eyi-10.000 kusukela manje, lapho kungekho iqhwa elisele e-Antarctica, lokhu kwanda kuzoba ngamamitha angama-60 njengoba kuchazelwe I-Sinc Agency umcwaningi eCarnegie Institution fos Science (United States) Ken Caldeira.
Ngaphezu kwemiphumela emibi ezoba nayo kuwo wonke umhlaba, e-Antarctica zombili izinhlobo zomdabu nezingenayo zizosabalala. Njengenjwayelo emvelweni, kuzoba nempi yokusinda, futhi kusobala ukuthi okulungiswe kahle kakhulu kuzonqoba. Lokhu kusho ukuthi ezinye zezinhlobo zomdabu zingaphela.
Njengamanje izindawo ezingenalo iqhwa, ezisukela kwikhilomitha elilodwa lesikwele kuya ezinkulungwaneni eziningana, zikhona izindawo zokuzalela okwezimvu zamanzi nezinyoni zasolwandle, kepha futhi kuyikhaya lezidalwa ezingenamgogodla, isikhunta kanye noqhwa. Ngokuhamba kwesikhathi, bangafika bazongenisa izwekazi lonke, okwenza sizibuze ukuthi liyoke liphinde libe luhlaza yini. njengoba kwakunjalo eminyakeni eyizigidi ezingama-50 edlule.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-Antarctica ingashiywa ngaphandle kweqhwa elingaphansi ngama-25% ngasekupheleni kwekhulu leminyaka